I-chalet epholileyo phantsi kweGastlosen, Jaun - I-Airbnb
I-chalet epholileyo phantsi kweGastlosen, Jaun
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguChristophe
I-Chalet epholileyo, ephangaleleyo yakudala, ilungiswe kakuhle kwindawo ezolileyo ngokujonga iFreiburg Alps kunye neJaunbach.
Ukunyuka okuninzi kunye namadlelo e-alpine alawulwayo ngokuthe ngqo kwi-chalet. Iibhafu ezishushu zaseCharmey malunga nemizuzu eyi-15 kude ngebhasi okanye ngemoto. Kumda kunye neBernese Oberland (ibhasi kunye neendlela zokuhamba).
Umgangatho ophantsi unendawo evulekileyo evulekileyo enesalon, igumbi lokutyela kunye nekhitshi langoku, elixhotyiswe kakhulu (iraclette, fondue ...). Indawo yokungena kunye nendlu yangasese eyahlukileyo.
Iindonga kunye nemigangatho ubukhulu becala zenziwe ngamaplanga
Isitofu sethayile kwi-salon ayifumaneki.
Umgangatho wokuqala unegumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini (ububanzi be-180cm), igumbi lokulala elineebhedi ezi-2 (ububanzi be-90cm), igumbi lokuhlala elinendawo yokutsala kunye negumbi lokuhlambela elinebhafu kunye nendlu yangasese.
Igadi kunye nebalcony enelanga langokuhlwa kunye nembono yeJauntal.
I-chalet ibekwe ngezantsi kumbindi welali kwindlela yokunyuka intaba kwindawo ezolileyo kakhulu kwaye epholileyo enehlathi, umsinga kunye neengxangxasi.
I-Gastlosen yomlingo, iparadesi yokuhambahamba ye-Gruyère-Pays d'Enhaut Nature Park kunye nendawo yokuhamba intaba yaseBernese Oberland inokufikelelwa ngeenyawo ngokuthe ngqo ukusuka kwi-chalet.
I-Epicerie kunye ne-bakery 2mn ngeenyawo!